FANAMARIHANA NY 29 MARSA 1947 : Nosantarina tamin’ny fotoam-pivavahana
Ny sabotsy lasa teo no notanterahina teny amin’ny Fiangonana Advantistsa Soamanandrariny ny fotoam-pivavahana noentina nisantarana ny fanamarihana ny fitsingerenan’ny tolom-piavotana tamin’ny 29 marsa 1947. 24 mars 2019
Fotoam-pivavahana natrehin’ny solontenam-panjakana ka ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena no nisolo toerana ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta teny an-toerana. Nambaran’ ity farany tao anatin’ny fandraisam-pitenenana nataony fa iombonana ny vanim-potoana tahaka izao. Vanim-potoana izay ahatsiarovana ny tolona nataon’ ireo Malagasy ahazoana ny fahaleovan-tena. Ankoatr’ izay, anisan’ny notsiandrian’ny minisitra ihany koa fa mametraka ho laharam-pahamehana amin’ny ady hatao amin’ny tsy fandriam-pahalemana ny fitondram-panjakana.
Mbola mankadiry, hoy izy, ny ezaka hatao amin’izany ka hiantsoana ny fandraisan’andraikitra sy ny tolo-tanana avy amin’ny olom-pirenena tsirairay. Tsy maintsy hatao, hoy hatrany ny minisitra, ny ezaka hametrahana filaminana manerana ny nosy, manana paikady amin’izany ny fitondram-panjakana. Vita iny tolona tamin’ ny 1947 saingy mandraka ankehitriny dia mbola mitohy hatrany ny tolona atao, tolona hitondrana an’i Madagasikara mankany amin’ny fandrosoana ary hialana amin’ny haizin’ny fahantrana izay mbola mahazo ny ankamaroan’ny Malagasy amin’izao fotoana izao.
“Mbola mitohy ny ady lehibe, ady amin’ny fahantrana, ady amin’ny kolikoly, ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana”, hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Amin’izao andro vitsy mialoha ny ahatsiarovana ny fankalazana ny tolom-panafahafa tamin’ny taona 1947 izao dia efa misy ireo hetsika maro samihafa hoentina hanamarihana izany. Isan’izany ny fampirantiana an-tsary ireo zava-nitranga tamin’izany fotoana.